U-Master Lu uvavanya iNhlonipho 20, iflegi yeflegi elandelayo | I-Androidsis
Emva kokuba uHuawei ekhuphe imipu yakhe enkulu kwisiqingatha sokuqala se-2019, ezazingo P30, lixesha lokuba uzuko lube liziko lokuqwalaselwa, makube njalo okomzuzwana.
El phakathi kuluhlu Imbeko 20i yabhengezwa kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye ngoku inkampani ilungiselela ukumiliselwa kwemodeli yayo ephambili, eya kuthi ibe yiyo Hlonipha i20. Oku kuye kwadlula kwi-Master Lu, i-benchmark yase-China, kwaye ikalwe njengesiqhelo sokusebenza okuphezulu.
Njengoko besesitshilo, iNhlonipho 20 yabonwa kwiqonga laseMaster Lu. Uluhlu luchaziwe phantsi kwegama lekhowudi «YAL-AL00». Oku kuqinisekisa ezinye zeempawu kunye neenkcukacha zobuchwephesha besixhobo esinamandla.
Into yokuqala etyhilayo yile Ixhaswe ngumqhubekekisi ophambili weHuawei, i HiSilicon Kirin 980 I-7 nm kunye ne-cores ezisibhozo, kwaye iya kuhambelana ne-8 GB ye-RAM. Isisombululo sescreen kuthiwa yi-FullHD + ye-2,340 x 1,080 pixels, eqinisekisa umlinganiso wayo we-19.5: 9. Ukuba uyakhumbula, nditsho nembeko 20i iza nesisombululo esifanayo.
Ngomntu ngamnye, Imodeli ikwazile ukufumana amanqaku angama-338,924 kwisalathiso somgangatho, ebeka kudidi oluphezulu kwaye isixelela okuninzi malunga nendlela eziza kubonelela ngayo kunye nokusebenza eya kukufumana ezandleni zakho, yakuba ifumanekile.
Okokugqibela, kufanelekile ukuba uyichaze loo nto i-Honor 20 iya kuba sisixhobo esibaluleke kakhulu kwisicwangciso somdlalo wohlobo lwe-2019. INhlonipho kunye neHuawei zijolise ekubeni ngumenzi we-smartphone okhokelayo ekupheleni kwalo nyaka. nangona iNhlonipho, njengoko kunjalo, ikude nayo. IHuawei, ngenxalenye yayo, isondele kakhulu ekufezekiseni; Okwangoku ngumenzi wesibini ngobukhulu weselfowuni, ngasemva kuphela kwe-Samsung yaseMzantsi Korea.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » U-Master Lu uvavanya i-Honor 20, iflegi elandelayo ye-brand